> Caymiska dhibaatooyinka
Suwiska dhexdiisa waxa jira tiro, dhibaatooyin iyo khatarta nolosha ah, caafimaadka ah, mulkiga iyo maaliyaddaah oo loosameyn karo daryeel-caymis. Qaybo kamid ah caymisku waa qasab qaybana waa ikhtiyaarkaaga (faakihaysi)
Caymisyadu waxay daboolaan ama aydaryeelaan dhibaatooyinka maaliyadeed ama dhaqaale ee aykeento dhacdo dhibaateysan oo dhacdey. Waxa lagu macneyn karaa dhacdo dhibaateysan mashaqo aanan loolahayn awood lagu ogaankaro iney dhici doonto iyo inkale (iney iman doonto) haddii la ogyahay iney imandoontana, la awoodi karin inlasii ogaado waqtiga ay imandoonto. Sidaa awgeed caymisyadu waa iskutagto dhibaato ama iskaashato. Si loocaawiyo haddey dhibaato kutimaado shakhsi ama shakhsiyaad ku jira iskutagtada (caymiska), shakhsi kasta wuxu kaqayb qaataa dhaqaale ururinta oo bilkastaba labixiyo qiime go’an oo calaa shakhsi ah (primes). Waxay caymisyadu daryeeli karaan dad, duunyo iyo dhul (ptrimoine)
Qiimaha laguma koobo khasaaraha dhibaatada maqan lagu qiyaaso oo kaliya laakiin waxa xisaabta lagu daraa kharashka kubaxa hawl wadayaasha xafiisyada, guryaha caymiska iyo dhammaan shaqaalaha caymiska.
Sidaa awgeed waxa ad ukala duwan qiimaha shirkadaha caymisyada iyo noocyada caymisyada.
Dadka shirkadaha caymisyada kujira qaarkood waxay kulugyeeshaan qiima sameynta ; sidaa darteed, dirawalka aangalin shil ama shilal, wuxu bixiyaa qiime raqiis ah(qiime jaban)
Fiira gaar ah, digtoonaan
Shirkadaha caymisyadu waxay dibedda kadhigi karaan caymiska shakhsigii kubixinwaaya qiimaha waqtigiisa(lacagta labixiyo bilkasta),kadib marka qoraal digniin iyo xasuusin ah loogeeyo. Waqtigaas kadib shirkadda caymisku kuma khasbana iney bixiso gargaar-dhibaato ama magdhaw, haddii shakhsigaa ayku dhacdo dhibaato.
In this section: Caymiska hoyga (guriga ama aqalka), Caymiska dammaanadda rayidka ee gaarka ah , Caymiska baabuutrta
xafiiska dhexdhexaadinta caymisyada gaarka looleeyahay iyo caymiska bulshada ee suva germal, faransiis talyaani iyo ingiriis
midawga caymisyada suwiska Germal, faransiis, talyaani, iyo ingiriis
carwada macaamiisha Germal, faransiis, talyaani iyo ingiriis.
Hay’adda daryeelka macaamiisha Germal, faransiis, talyaani, iyo ingiriis
midawga macaamiisha romaanka (cantons Romain) Germal, faransiis, talyaani, iyo ingiriis
Caymiska dammaanadda rayidka ee gaarka ah
Caymiska hoyga (guriga ama aqalka)